Gabdhaha Rasmiga ah ee Maalinta ICT: Waxaan la sheekeysaneynaa Fran del Pozo, oo ka socda Code.ORG | War gadget
Miguel Hernández | 22/04/2021 13:47 | General, Noticias
Maanta, Abriil 22, 22, maalinta rasmiga ah ee caalamiga ah ee gabdhaha ICT waa la xusaa, waa maalin muhiim ah haddii aan tixgelinno farqiga weyn ee xagga jinsiga ee ka dhaca kala-guurka iyo barnaamijyada dhijitaalka ah, waa taas sababta aan u dooneyno inaan kuu sheegno waxa Xeerku ka kooban yahay. ORG iyo sida howlahoodu u caawiyaan kumanaan gabdhood oo daafaha dunida ka kala yimid qayb kasta oo ka mid ah guriga si ay wax uga bartaan tikniyoolajiyad cusub iyo gaar ahaan barnaamijyada. Waxaan la sheekaysanay Fran del Pozo, madaxa Code.ORG ee Spain.
At Actualidad Gadget, oo had iyo jeer daacad u ah anshaxayaga tifaftirka, waxaan ku sii wadaynaa qoraallada buuxa ee wareysiyada aan qaadno.
Maxaa ku jira Goorma ayuu Code.ORG go'aansaday inuu kaqeybqaato kala qaybsanaanta dhijitaalka ah ee u dhaxaysa dhalinyarada iyo inuu ka mid noqdo ku-meelgaarkan?
Code.org wuxuu ku dhashay sanadki 2013 wadanka Mareykanka ujeedadiisuna waxay ahayd in canug walba oo iskuul kasta oo aduunka kuyaala uu fursad uhelo inuu barto nambarka.
Moodal guul la xaqiijiyay. In ka badan 40% ardayda Waqooyiga Ameerika waxay koonto ku leeyihiin Code.org, iyo sidoo kale + 2mm macallimiin iyo 55mm ardayda adduunka oo dhan (badhkood dumar yihiin).
Mashruuca waxaa hogaaminaya hogaamiyaasha caalamka, siyaasada, bulshada iyo dhaqaalaha, sida Bill Gates, Jeff Bezos, Satya Nadella, Eric Schmidt, Tim Cook, Barack Obama, Bill Clinton, Richard Branson, BONO, ama hormuudka Jaamacadaha Stanford, Harvard ama MIT MediaLab iyo kuwa kale oo badan ... iyo oo ay maalgeliyeen qaar ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn adduunka, sida Google, Microsoft, Amazon, General Motors iyo Disney.
Sidee Code.ORG uga shaqeeyaa inuu ka caawiyo gabdhaha yaryar inay bartaan barnaamijyada?
Si wadajir ah ula Khan Khan, waxaan nahay madal tababar oo ugu weyn adduunka marka laga hadlayo tirada isticmaaleyaasha. Waxaan haynaa waxyaabo bilaash ah oo lagu turjumay in kabadan 60 luqadood oo loogu talagalay ardayda da'doodu tahay 4 ilaa 18 sano. Intaa waxaa dheer, waxaan si joogto ah ugu ololeynaa inaan kor u qaadno helitaanka dhalinyarada ee barnaamijyada.
Kala duwanaanshaheena weyn waa inaan nahay madal gabi ahaanba furan oo xor ka ah meel kasta oo adduunka ah. Waxyaabaha ku jira waxaa loogu talagalay in lagu tababaro wiilasha iyo gabdhaha laga bilaabo da 'yar, (40% ardayda Mareykanka ah ee ku jira kooxdan da' da 'waa isticmaaleyaasha Code.org) oo leh koorsooyin kala duwan iyadoo kuxiran da'da waxbarashada. Dhinaca kale, waxaa sidoo kale loogu talagalay macallimiinta, oo ah bixiyaha ugu weyn ee tababarka iyo qalab lagu horumariyo barnaamijyadooda waxbarasho. Marka la soo koobo, at Code.org waxaan ku dhiirrigelinnaa qaab loo wada dhan yahay oo caddaalad ah, dhammaantood, ujeeddadeeduna tahay in laga takhaluso macluumaadka, jinsiga iyo farqiga tartan ee jiri kara.
Waa maxay? ku habboonaanta barnaamijku ma ku yeelan karaa shaqadaada iyo mustaqbalkaaga shaqsiyeed?
Si uun ama mid kale, dhammaan shaqooyinka waxay la xiriiraan tiknoolajiyadda iyo xisaabinta. Si kastaba ha noqotee, dadka intiisa badani kama warqabaan waxa barnaamijku yahay iyo muhiimada uu u yeelan doono mustaqbalka carruurtooda. Xaqiiqdii, barashada sayniska kombiyuutarka ayaa muhiim u ah mustaqbalka dhalinyarada iyo tartanka Isbaanishka.
Waxay fure u tahay in tababarka la waafajiyo shaqada sida dhaqaalaha adduunka ugu hal abuurka badan ay sameynayaan.
Maxaad u maleyneysaa inay tahay sababta tirada haweenka wax u barta ee naftooda u huraya sayniska kombiyuutarka iyo teknoolojiyadda ay u yaraadeen adduunyada sii kordheysa ee lambarkeedu sii kordhayo.
Waxaan u maleynayaa inay jirto dhibaato fikradeed oo gabi ahaanba lama huraan u ah in la burburiyo dhibaatada ka haysata shaqooyinka farsamada iyo awood la'aanta haweenka. Dhaqan ahaan, waxaa la fahmay in shaqooyinka ugu adag, ee ubaahan dadaal iyo dadaal dheeri ah, aan loogu talagalin dumarka waana sababta xitaa qoysaska ay kula taliyeen gabdhahooda inay diirada saaraan laamaha bulshada ee cilmiga, sida daawada. Warbaahintu waxay door muhiim ah ka ciyaartaa ciribtirka farqiga u dhexeeya jinsiga. In ka badan ayaa la muujiyey in ragga iyo haweenku ay si siman u karti leeyihiin ayna lagama maarmaan tahay in haweenka lagu daro sayniska iyo teknolojiyadda, oo aan loo eegin arrin caddaalad ama sinnaan ah laakiin loo baahan yahay karti iyo tartan.
Sidee Code.ORG u maalgeliyaa dhammaan mashaariicdiisa bilaashka ah?
Kuwa ka socda deeq bixiyeyaashayada, kuwaas oo inta badan ah shirkadaha tiknoolajiyada waaweyn ee adduunka, iyo sidoo kale samafalayaasha waa weyn ee Waqooyiga Ameerika. Si tartiib tartiib ah ayaan u raadineynaa ilo dhaqaale oo cusub iyo deeq-bixiyeyaal ka kala socda qeybaha kala duwan ee adduunka maxaa yeelay runtii waxaan nahay mashruuc caalami ah.
Sidee labada luqadood ee tikniyoolajiyadu u saamaysaa kala qaybsanaanta dijitaalka ah iyo sidee Code.ORG ugu talagashay inuu ula dagaallamo?
Gabi ahaanba way saameyneysaa maxaa yeelay iskuma habeyn tababarka iyo shaqada waxay soo saari doontaa dhimis xirfadlayaal ah, taasoo sii adkaaneysa in la daboolo. Waxay saamayn ku yeelanaysaa xagga shaqada, fayo-qabka, tartanka iyo waxsoosaarka. Waxaan la daahnay Ingiriisiga mana awoodi karno wax la mid ah inay nagu dhacaan barnaamijyo (iyo fikir xisaabeed).
Ma u malaynaysaa in dhalinyarada maanta haysataa dhibaatooyin xagga hal-abuurka, fikirka xasaasiga ah, iyo xallinta dhibaatooyinka?
Ma hayo xog aan kaga jawaabo su'aashaas. Laakiin haddii aan dhihi karo marka barnaamijyada aan horumarinno fikirka xisaabinta tanina waxay doorbidaysaa horumarinta xirfado kale oo taxane ah sida caqli-gal, fikirka muhiimka ah ama xallinta dhibaatooyinka. Ma ogin waxa shaqooyinka mustaqbalka noqon doonaan, laakiin waxaan ognahay xirfadaha ay u baahan doonaan oo ay yihiin, kuwa kale, kuwan.
Dib ugu noqoshada Maalinta Caalamiga ah ee Gabdhaha, Code.ORG ma qorsheyneysaa inay qabato howlo ama ololeyaal diiradda lagu saaray dabaaldeggan gaarka ah?
Si gaar ah maahan tan iyo markii aan si joogto ah u ololeyno, maadaama ay qayb ka tahay DNA-dayada in gabdhaha lagu daro.
Maxaad u maleyneysaa in gelitaanka Code.ORG ee waddooyinka waddooyinka horumarka ay noqon karto?
Afrika tusaale ahaan waa qaarad leh tilmaamo gaar ah. Wadamada soo koraya waxaan gacmaha is qabsaneynaa ururada caalamiga ah ee ka howlgala goobta, waxay yihiin, oo ay la jiraan dowladaha hoose, kuwa ugu fiican xulafada dhul-goboleedyadan.
Waxaan u mahadcelineynaa kooxda Code.ORG iyo gaar ahaan Fran del Pozo sida ay u fiirsadeen iyo sida ay uga jawaabeen dhammaan su'aalahan diidmo la'aan. Waxaan rajeyneynaa inaan awood u yeelanno inaan gacan ka geysano sidii aan ugu fidin lahayn ballaarinta barnaamijyada kuwa ugu yar, iyo gaar ahaan jabinta caqabadaha jinsiga ee waaxda aysan aheyn inay lahaadaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Noticias » Gabdhaha Rasmiga ah ee Maalinta ICT: Waxaan la sheekeysaneynaa Fran del Pozo, oo ka socda Code.ORG